Fepetra vaovao amin'ny fizahan-tany ara-poko any India
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Fepetra vaovao amin'ny fizahan-tany ara-poko any India
Novambra 12, 2012
Ny nip dia eny amin'ny rivotra, fa ny buzz amin'ny sehatry ny fizahan-tany Odisha any India tsy hita.
Ny nip dia eny amin'ny rivotra, fa ny buzz amin'ny sehatry ny fizahan-tany Odisha any India tsy hita. Ny sehatry ny fandraisam-bahiny an'ny fanjakana Indiana, izay mihombo amin'ny ririnina, dia miaina vanim-potoana manjavozavo amin'ity indray mitoraka ity. Ny dian'ireo mpizahatany vahiny dia nanjono noho ny fameperana ny fizahan-tany ara-poko napetraky ny governemanta fanjakana tamin'ny volana feb.
Raha mpizahatany vahiny efa ho 65,000 no nitsidika an'i Odisha tamin'ny taon-dasa, manodidina ny 20,000 no tonga tamin'ny Novambra, Desambra ary Janoary, hoy ny loharanom-baovao. Na i Puri, izay mahasarika ny mpizahatany vahiny betsaka indrindra, dia tsy nahavita izany tamin'ity vanim-potoana ity. “Mpizahatany vahiny vitsivitsy ihany no tonga ao Puri amin'izao fotoana izao. Betsaka ny mpandraharaha mpizahatany sy hotely no miatrika fanafoanana ny fitsangatsanganan'ny vahiny noho ny famerana ny fizahan-tany ara-poko, "hoy ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny biraon'ny fizahan-tany Puri.
Ny fizahan-tany ara-poko dia nahazo fahatezerana taorian'ny fiampangana tamin'ny fiandohan'ity taona ity fa ny foko dia ampiasaina amin'ny fomba ratsy ho 'safari olombelona' ho an'ny orinasa. Vetivety dia namoaka torolàlana henjana ny governemanta goavambe, mametra ny fakana sary ny foko ary mitsidika ireo tanàna onenan'ireo Bondas taloha sy Dongaria Kandhas, fantatra ihany koa amin'ny hoe Vulnerable Tribal Groups (PVTGs). Ny fakana an-keriny mpizahatany italiana roa nataon'ny Maoista tamin'ny volana martsa dia niteraka fahasimbana bebe kokoa tamin'ny fizahan-tany ara-poko teraka tao amin'ny fanjakana.
“Efa nofoanana ny fonosana fitsangatsanganana roa, misy mpizahatany vahiny 15 avy any Danemark. Nanana fahaiza-manao fizahan-tany sy fizahan-tany ara-poko izy ireo. Fa ny fameperana dia nanery azy ireo handeha ho any Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland ary Gujarat, ”hoy ny sekretera an'ny Fikambanan'ny Mpikambana ao amin'ny Odisha Tour Yugabrat Kar.
Niaiky ny minisitry ny fizahan-tany Maheswar Mohanty fa manjary doldrum ny fizahan-tany ara-poko. “Tsy tonga ny vazaha noho ny fameperana. Mitady vahaolana matotra ny governemanta, ”hoy i Mohanty tamin'ny TOI. "Tsy ho ela dia hanokatra birao fikandrana tokana ao Bhubaneswar izahay hahafahan'ny mpandraharaha mpizahatany sy mpizahatany mahazo alalana hitsidika ireo faritra misy foko," hoy i Mohanty.
Ireo mpandraharaha mpizahatany dia nitaky ny hametrahana ilay kaontera tokana notokanana tao Bhubaneswar taorian'ny nangatahan'ny governemanta tamin'izy ireo mba hahazoana alalana amin'ireo mpanangona distrika, izay nisy olana. “Hatramin'izao dia mbola tsy mazava ny momba ny boriborintany misy ny governemanta izay milaza fa afaka mitondra mpizahatany mankamin'ny tsenan'ny foko misy alalana avy amin'ireo mpanangona izahay. Saingy ny mpanangom-bokatra dia tsy mamporisika ny fizahantany any amin'ny distrikan'izy ireo, ”hoy ny nosoratan'ny OTOA tamin'ny sekreteran'ny fizahantany vao tsy ela akory izay.
“Na dia manelingelina ny hetsika Maoista aza ireo fanjakana mpifanolo-bodirindrina amintsika, Chhattishgarh sy Andhra Pradesh, dia mandray ny mpizahatany amin'ny alàlan'ny fonosana manintona izy ireo. Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland ary Gujarat dia mampiroborobo ny faritra misy foko misy azy ireo ary mamaha ny anjaranay amin'ny tsena amin'ireo fanjakana ireo izahay, ”hoy i Kar.